Ndụmọdụ site na Semalt: Block WP-Login.php Brute Force Attacks With CloudFlare Page Iwu
cybercriminals na-eji mbuso agha agha eme ihe iji mebie akụkọ. Onye na-awakpo ahụ na-anwale ọtụtụ aha njirimara na okwuntughe dị ka o kwere mee na ngwa ngwa. Mwakpo ahụ na - eme ka mcheta ncheta ma mgbe ụfọdụ na - akụda mgbe ọkwa nchekwa dị elu.
Michael Brown, ọkachamara ọkachamara site na Semalt , na-enye ụzọ ndị a pụrụ isi mee nke ọma na nke a - caracteristicas de una camara reflex profesional.
Ebe ọ bụ na ndị agha na - achọ ịlụ agha aghaghị ịgbalị ịbanye ngwa ngwa karịa ụmụ mmadụ ka ha dị irè, a ga - eji ọnụego amachibido iwu iji gbochi ha.
CloudFlare na-enye ụfọdụ nchekwa site na bọtịnụ na DDoS. Otu n'ime ngwá ọrụ CloudFlare na-enye bụ "Chebe Nbanye gị", ngwá ọrụ nke na-emepụta iwu iji gbochie ndị ahịa na-anwa ịbanye karịa ugboro 5 na 5 nkeji. Ọchịchị a zuru oke igbochi bọmbụ na ndị na-awakpo ndị nwere ike ịnwa iji mwakpo Brute-Force. Ha enweghị ike ịnweta gị nbanye (wp-login.php).
Uru ọzọ nke iji Iwu Iwu bụ nnweta ahụ site n'aka ezigbo ndị ọbịa adịghị emetụta. Ọnụ ọsọ nke onye ahụ na-awakpo na-eziga ya bụ ihe karịrị nke mmadụ. Ohere nke ikpochi onye ọrụ ziri ezi dị ntakịrị ma ọ gwụla ma onye ọrụ ahụ agbaghawo nzere ha.
Otu esi eji CloudFlare Page Iwu iji Block Brute Force Attacks
Mwakpo Brute-Force abụghị kpọmkwem maka WordPress. Mwakpo ahụ nwere ike ime na ngwa ngwa weebụ ọ bụla ọzọ. Mana ebe ọ bụ na Word Press bụ ihe a na-ewu ewu, ọ bụ otu n'ime ihe kachasị elu nke ndị na-agba ọsọ..Mwakpo ndị a na-eleba anya na wp-login.php.
Gịnị ka ị na - eme mgbe ị na - ebute mwakpo? Ebumnuche bụ isi bụ iwu CloudFlare Page nke nwere ike ime nnyocha nyocha nke ọma maka faịlụ wp-login.php ma weghasị bots na ndị na - agba ọsọ.
Mgbe ịbanye n'ime akaụntụ CloudFlare gị, họrọ Page Iwu> Mepụta Ibe Page. Mgbe ahụ ị ga-eme ntọala ndị a:
Ọ bụrụ na ị na-eji subdomains, setịpụrụ Ọ bụrụ na URL dabara 'subdomain lekwasịrị anya'.
Pịa + Tinye mgbakwunye wee họrọ Nchọgharị Ntụkwasị Obi Nyocha.
Tinye ntọala ọzọ maka Ọkwa Nchekwa ma họrọ ọkwa nchedo m nọ n'okpuru mmegide.
Zọpụta ntọala ndị a ma dozie.
Site na Iwu CloudFlare, a na-eme ka nchekwa nke ibe nbanye ike ma na-egbochi bọọlụ ọjọọ ịnweta ihuenyo ahụ. Naanị ihe mgbochi nke iji ngwá ọrụ a bụ na mgbe ọ bụla i kpochapụrụ ihe nchọgharị gị, ma ọ bụ oge ọ bụla kuki maka saịtị gị na-agwụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-echere 5 sekọnd mgbe ị abanye na ya ka Nchọpụta Ịchọpụta Nchọpụta na-amalite ọrụ.
Iwu Iwu na-eme ihe ọ bụla na-aga na ibe gị dịka ihe agha nwere ike ime. Dịka e kwuru na mbụ, a gaghị emetụta ndị nleta ziri ezi ma ọ ga-achọ ịnweta nchọpụta nyocha CloudFlare. E nwere ụzọ ndị ọzọ nke igbochi mwakpo ume ọgụ. Otú ọ dị, Usoro Ụkpụrụ Page dị mfe ịghọta na mejuputa.
Echerela ruo mgbe onye na-ahụ maka ntanetị gị na-agwa gị na emebiela ihe onwunwe gị. Ọ bụrụ na ị dabere na sava maka azụmahịa gị, ahapụla ohere ọ bụla maka ndị mwakpo Brute-Force iji jiri ihe onwunwe gị. Iwu Iwu nwere ike inyere gị aka melite ahụmịhe onye ọrụ na ịnọgide na-eche nche nchebe maka ngalaba gị, arụ ọrụ arụmọrụ, na ịbelata ojiji bandwidth.
Ọnụ ọgụgụ nke Iwu Iwu dabeere na ụdị atụmatụ ị họọrọ. Atụmatụ free nwere 3 iwu, ma ị nwere ike ịzụta atụmatụ nke nwere ọtụtụ iwu iji kwado ihe nchedo gị.